Umbhede & Ukugeza Okuzimele - I-Airbnb
Umbhede & Ukugeza Okuzimele
Fort Worth, Texas, i-United States
Ikamelo e-ikhaya ibungazwe ngu-Shannon
Ikhaya lomndeni omuhle ongashadile enyakatho ye-Fort Worth, eTexas. Leli gumbi langasese linendawo yalo yokugezela egcwele eduze kwalo. Umabonakude nawo usekamelweni. Imizuzu eyi-15 ukusuka eTexas Motor Speedway, imizuzu engama-25 ukusuka esikhumulweni sezindiza i-DFW, kanye nemizuzu engama-30 ukusuka esitokisini saseFort Worth. Indawo enobungane impela!
Isikhumba silula kakhulu. Ngisebenza kanzima ukuze ngiqinisekise ukuthi unakho okudingayo ngesikhathi sokuhlala kwakho. Kusukela kumathawula engeziwe, ukuya kwelinye igumbi efrijini, ngifuna uzizwe ukhululekile futhi usekhaya.
Unekamelo langasese phambi kwendlu kanye negumbi lokugezela eligcwele, elisanda kulungiswa elisetshenziswa nguwe kuphela izinyawo ezingu-3 ukusuka ekamelweni lakho lokulala kanye nekhethini lobumfihlo elihlukanisa indawo yakho nendlu yonke.
Lena indawo yomndeni enobungani kakhulu. Ubusuku buthule futhi izimpelasonto zihlanganisa abantu abahamba nezinja zabo noma izingane ezigibela amabhayisikili phansi komgwaqo. Sikhululeke kakhulu ekhaya, zizwe ukhululekile ukucela noma yini eyengeziwe oyidingayo. I-Kroger enhle iseduze kakhulu futhi izinhlobonhlobo zezinketho zokulethwa zikleliswe encwadini yezivakashi.
I was born and raised in Wisconsin. I have lived in Texas now for four years and love NOT shoveling snow in the winter! The summer are very hot, but the southern hospitality makes…
OLUNYE UDABA***Wonke umuntu ohlala ekhaya usegonywe ngokugcwele ngomuthi wokugomela i-COVID-19***
Ngingatholakala ngocingo, ngombhalo, noma ngomlayezo osheshayo lapha ku-Airbnb. Ngisebenza kakhulu, kodwa uma ungithumelela umbhalo noma umlayezo, ngizobuyela kuwe ngokushesha okukhulu.
Ngingatholakala ngocingo, ngombhalo, noma ngomlayezo osheshayo lapha ku-Airbn…
Hlola ezinye izinketho ezise- Fort Worth namaphethelo